Zvitsva zvemangwana iPad Air 5, iPad Mini 6 uye iPad 9 zvinosvinwa | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 29/07/2021 16:00 | iPad, Noticias
Iyo mhedzisiro yemitambo iyo Apple yave iine mukati mayo nhoroondo yakave yakabatwa mumakore apfuura. Kusvikira nguva isiri yapfuura, Gunyana aive mwedzi wa iPhone nepo Gumiguru yaive mwedzi wePadad. Zvisinei nemwedzi wekuratidzira, chiri pachena ndechekuti Apple iri kushanda mukugadzirisa yayo yese renji yePads pakati padzo pane iPad Mhepo 5, iPad Mini 6 uye iPad 9th chizvarwa. Muchokwadi, mutengesi weChinese akafumura zvimwe zvezvinhu izvo imwe neimwe yemidziyo iyi yaigona kuzopedzisira yaisanganisira.
Iyi inogona kuve iyo nyowani iPad Air 5, iPad Mini 6 uye iPad 9
Ruzivo rwacho runobva kune inozivikanwa inozivikanwa yepakati yeJapan, MacOtakara, iyo yakagamuchira kudonha kukuru kubva kumutengesi weChinese anozivikanwa kune tech tech. Nekuda kwekudonha isu tinogona kusimbisa, pamwe nemamwe makuhwa apfuura, izvo Apple iri kushanda kuvandudza yayo iPad Mhepo, iPad Mini uye iPad kuzvizvarwa zvavo zvinotevera.
Chizvarwa chinotevera iPad Mini ichaita mini-LED kuratidza
Zvinoenderana neruzivo rwapihwa, iPad Mhepo 5 Ichaisa dhizaini yakafanana neyechitatu-chizvarwa 11-inch iPad Pro. Ndokunge, tinogona kupinda kare pa11 inches kuwedzera kune taura iyo mbiri kamera system: yakafara angle uye Ultra yakafara angle. Nezve iyo chip iyo yaachazobatanidza, ichave iyo A15 Bionic chip, mukoma weA15 achatakura iyo iPhone 13. Iyo chip ichaenderana ne5G mmWave. Pakupedzisira, iyo iPad Air 5 inogona kusanganisira vatauri vana.
Makuhwa anoenderera naye 9th chizvarwa iPad, iyo yakakosha mhando yemapiritsi ayo Apple anotengesa. Iko hakuna makuru matsva akaverengerwa muchigadzirwa ichi kwemakore akati wandei. Apple pamwe inoda chengetedza dhizaini kusvika 2022 kana kupfuura, uye kuti chinangwa ndechekupa yakachipa uye ine simba iPad.
Pakupedzisira, iyo Chizvarwa chechitanhatu iPad Mini Ichave iine 8,4-inch screen, iine A14 Bionic chip, inova ndiyo inotakurirwa nePad Air Air. Padanho rekugadzira, chinhu chimwe chete chinoitika seyepakutanga iPad, hapazovi neshanduko kusvika mushure megore ra2022.
Iko kune zvakare mukana wekuti chero yeiPads yakurukurwa kusvika ikozvino inosanganisa ne LiDAR scanner. Nekudaro, ivo vanoramba mukana iwoyo, vachiti Apple inongoisuma mune izvo zvigadzirwa izvo zviri chikamu che'Pro 'renji, zvese muPhones uye iPads.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Hutsva Zvimiro Zvinodonhedzwa zveRamangwana iPad Mhepo 5, iPad Mini 6, uye iPad 9